व्यापार घाटा कम गर्न मन्त्री यादवको यस्तो छ नयाँ फर्मुला
रासस प्रकाशित: २०७५-३-२४ गते | 1959 पटक हेरिएको
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन गरेर विद्यमान उच्चस्तरको व्यापारघाटा तथा बेरोजगारीलाई न्यून गर्दै लैजाने बताउनुभएको छ ।
भाइटिकाको दक्षिणा मोबाइल बैंकिङबाट गरे एकसय बोनस !
काठमाडौं । यस वर्षको भाइटीकामा मोबाइल बैंकिङबाट दक्षिणा ट्रान्सफर गरे १ सय रुपैयाँ बोनस प्राप्त हुने भएको छ । एनआईसी एसिया बैंकले दक्षिणा रकम बैंकको मो–बैंक नामक मोबा..
सुनको मूल्य चुलिएपछि बन्यो यस्तो रेकर्ड, यस्तो छ मुल्य !
काठमाडौँ । आज (बिहीबार) नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। बुधबार प्रतितोला ६० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज ३ सयले बढेको हो ।&..